IHuawei ngoku isebenza kumacwecwe amabini amatsha | I-Androidsis
Kule mpelaveki kubhengezwe ukuba uHuawei uthweswe isithsaba njengo elona lizwe lithengisa kakhulu ithebhulethi ye-Android en Ikota yokuqala yonyaka. Ngale ndlela, umenzi waseTshayina ubeka njengophawu lwesibini kwihlabathi. Bakwazile ukungayityi i-Samsung, eyayiluphawu olwaluphetheyo kwi-Android kude kube ngoku. Ukongeza, kubonakala ngathi umenzi waseTshayina sele esebenza kwiipilisi ezintsha.
Iindaba ezimnandi zeHuawei, eza emva kokuba ifundiwe ukuba nayo ibiyiyo ukuthengisa kwee-smartphones zabo kunyukile kwikota yokuqala kulo nyaka. Unyaka ke uqale kakuhle. Uhlobo lwaseTshayina ngoku lunamacwecwe amabini ubuncinci kuphuhliso, malunga nokuba yeyiphi idatha esele ifikile.
Kubonakala ngathi uphawu lwesiTshayina lusebenza kumacwecwe amabini aphezulu. Kuba kuyaziwa ukuba aba babini babeza kufika kunye neKirin 980 njengeprosesa. Yiprosesa esinayo kwiHuawei P30. Ke baya kufika benamandla. Ngokobungakanani, enye inokuba nescreen se-intshi ye-10,7 kwaye enye ibe sisi-8,4-intshi ubukhulu.
Ithebhulethi ye-10,7-intshi ikwalindeleke ukuba ibhetri yomthamo we-7.500 mAh. Ngelixa enye imodeli yayiza kufika ngebhetri yomthamo we-4.200 mAh. Into enomdla kukuba bobabini bazakufika benekhamera enamandla. Kuba baya kuba nekhamera ye-MP eyi-48. Yintoni egqithisile, Kuzo zombini iimeko inokuba yisenzi senzwa sikaSony IMX586, Yeyona inamandla kule ndawo kwaye inika i-MP eyi-48 yokwenyani.
Okwangoku azikho iinkcukacha ezithe zatyhilwa ngezi pilisi zimbini zeHuawei. Uphawu lwaseTshayina aluqinisekisanga nantoni na ngokusemthethweni. Kodwa kulo nyaka, amacwecwe amatsha kuya kufuneka afike, ngaphakathi kuluhlu lweMediaPad. Ukusukela ngoku ukuza kuthi ga kulo nyaka khange sibenayo icwecwe lenxalenye yalo okwangoku.
Ke kuyakufuneka silinde ithutyana kule nkalo. Ngokuqinisekileyo kungekudala kuya kubakho idatha entsha kwezi macwecwe amatsha IHuawei. Uphawu lwesiTshayina ngoku ngumthengisi ophambili kweli candelo, ubuncinci kwikota yokuqala. Ke bajonge ukonyusa ezi ntengiso.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Huawei » IHuawei isebenza kumacwecwe amatsha anekhamera ye-48 MP